ရွာဦးကျောင်း: November 2011
ကပ္ပိယကျော်ခေါင် နှင့် ဒန်အိုးပျံ
တစ်နေ့သ၌ အကျွန်ုပ် ကပ္ပိယကျော်ခေါင်သည်၊ ဦးဇင်းငယ်တစ်ပါးနှင့် လိုက်ပါလျှက် တာမွေမြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည်ကာ၊ ဆွမ်းအလို့ငှာ ဖိတ်မန်တကာ့ ပြုနေလေတော့၏၊ ရန်ကုန် စာသင်သားတို့ထုံစံအတိုင်း အိမ်စဉ်လှည့်လည်ကာ ဆွမ်းဖိတ်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက်ဖြင့် ဆွမ်းဖိတ်လာခဲ့သည်မှာ ရပ်ကွက်ပေါင်းမနည်းတော့ပေ၊ သို့သော် အကျွန်ုပ်၏ အားနည်းချက်ကြောင့် ပေလော့၊ သို့တည်းမဟုတ် ဦးဇင်းငယ်၏ ပါရမီဘုန်းကံနည်းပါးခြင်းကြောင့်ပေလော့ မဆိုနိုင်ပေ၊ ညနေ ၆ နာရီ ထိုခါနီး အချိန်ထိ ဆွမ်းခံအိမ်ဟူ၍ မည်မည်ရရ မရသေးချေ။. ရန်ကုန်တွင် ဆွမ်းခံအိမ် လိုက်၍ဖိတ်ရခြင်းမှာ စာသင်သား ရဟန်းပျိုများအတွက် အလွန်တရာ ခက်ခဲသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။ မိမိသဘောကျသော စာသင်တိုက်ဖြစ်၍ နေချင်သော်လည်း ဆွမ်းခံအိမ် အလုံအလောက်မရှိခဲ့သော် အခက်ကြုံတတ်ကြရလေသည်။ ဆွမ်းဖိတ်ရာ၌ တွေ့ရတတ်သော အခက်အခဲများမှာ ဤသို့တည်း။ အချို့သော ဒကာ ဒကာများမှာ မိမိတို့အိမ်တွင် ဆွမ်းခံကြွနေသော ကိုယ်တော်လေးများ မြောက်များစွာ ရှိနေကြ၍ လက်မခံလိုကြတော့ကြောင်း ပြောဆိုတတ်ကြခြင်း၊ အချို့သော ဒကာ ဒကာမများမူကာ၊ မိမိတို့ကို မိမိ ဧည့်သည်ဟုဆိုကာ အိမ်ရှင်များ မရှိ၍ လက်မခံလိုကြောင်း ငြင်းတတ်ကြလေသည်။ သို့သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကား အမှန်စင်စစ် ဧည့်သည်များ ဟုတ် မဟုတ်ကို ကြည့်ရုံနှင့် သိနိုင်လေသည်၊ လက်မခံလို၍ အကြောင်းပြခြင်းသာဖြစ်လေသည်။ ထို့သို့ အစရှိသော အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံများဖြင့် တစ်နေကုန် ဆွမ်းခံအိမ် ဖိတ်၍ မရသည့်အဆုံးတွင်ကား၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဤတိုက်တစ်လုံးကို တက်၍ ဖိတ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ၊ ရှစ်ထပ်တိုက်ကြီး တစ်လုံးကို ဗဟိုပြုလျှက် နစ်ဦးသားလျှောက်လှမ်းလာခဲ့လေတော့သည်။ တိုက်ပေါ်သို့ မတက်မီ လှေကားဝတွင် မင်္ဂလာမရှိစွာဖြင့်ပင် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသာတစ်ဦတုိ့ အားပေါင်အာရင်းသန်သန်ဖြင့် ငြင်းခုံနေကြသည် အကျွန်ုပ်ကပ္ပိယကျော်ခေါင် အကဲခမ်မိခဲ့လေသည်။ ၄င်းအသံသည်ကာ မြေညီထပ်မှသည် ငါးထပ်မြောက်ထိအောင် ဆူညံနေလေတော့၏၊ ဤသို့နှင့်ပင် အကျွန်ုပ်တို့နစ်ဦးသား ဆွမ်းခံအိမ်အလို့ငှာ မရလည်း ရလည်းအမြတ်ဟု ဆိုကာ တိုက်ခန်းများကို တစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း စတင်ဖိတ်လေတော့၏၊ သို့သော် အပေါ်ဆုံးထပ်သို့ ရောက်သည့်တိုင်အောင် မည့်သည့်အိမ်ကမျှ လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိသေးချေတကား။ ထိုအခါ၌ ကျွန်ုပ်ကပ္ပိယကျော်ခေါင်သည်၊ စိတ်မရှည်တော့သည်ဖြစ်၍ ၄င်းကိုယ်တော်ငယ်အား တော်တော်ဘုန်းကံပါရမီနည်းတဲ့ ကိုယ်တော်ဟု ပြောဆိုကာဖြင့်၊ ဒီတစ်ကြိမ် ငါကိုယ်တိုင်ဖိတ်မည်၊ ကိုယ်တော် အသာနေဟု ဆိုကာ၊ ရှစ်ထပ်မြောက်သို့ တက်ခဲ့လေတော့၏၊ ရှစ်ထပ်မြောက်သို့အတက်တွင်းကား လင်းမယားစကားများသံလိုလို အသံတစ်ခုကိုကြားမိ၍၊ ငကျော်ခေါင် အသေအချာ နားထောင်စမ်း ဒီအသံ ဘယ်ကလာသလဲဟု မေးလေ၏၊ ကျွန်ုပ်သည်ကား အလွန်တရာပါးနပ်သူဖြစ်၍ ဤသို့ပြန်ဖြေလိုက်လေ၏၊ ဒီကိုယ်တော်နှယ် အောက်ထပ်လှေကားတက်ဝမှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နှင့် စကားများနေကြတာကို မမြင်ခဲ့ဘူးလား၊ အဲဒီက လာတဲ့ အသံပေါ့ဟု၊ ခပ်တည်တည်ဖြင့်ပင် ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်လေ၏၊ ရှစ်ထပ်သို့ရောက်သည်နှင့် ၄င်းအသံသည်လည်း အနည်းငယ် ပို၍ကျယ်လောင်လာသကဲ့သို့ထင်ရလေသည်။ အကျွန်ုသည်ကား လှေကားများ၏ ပဲ့တင်သံကြောင့် အောက်ထပ်က အသံဟုသာ တစ်ထစ်ကျတွက်ဆလိုက်လေသည်။ တံခါးမ တစ်ခုရှေ့ တွင် ကိုယ်တော်ငယ်နှင့် အကျွန်ုပ်တို့နစ်ဦးသား မတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ ဆွမ်းခံဖိတ်ရန် တံခါးကို အကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ခေါက်မည်အပြုတွင်၊ ဒုန်းဟူသော အသံတစ်ခုနှင့် ၄င်း တံခါးမကြီးပွင့်ထွက်လာလေတော့၏၊ တစ်ခဏချင်းဖြင့်ပင်လျှ အလွန်လျှင်မြန်သော အဟုန်ဖြင့်၊ တံခါးဝမှ ဒန်အိုးတစ်လုံး ပလူပျံသကဲ့သို့ ထွက်ကျလာပြီးလျှင်၊ အကျွန်ုပ်၏ နားထင်နားမှ ဖြတ်ကျော်ကာ၊ ဒိုင်းဟူသော အသံနှင့်အတူ တစ်ဖက်နံရန်ကို ထိမှန်လေတော့၏၊ အရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်သွားခဲ့လေပြီ၊ အကျွနု်ပ်သည် ငယ်စဉ်က ဆရာအောင်မြင့်ထံတွင် သင်ခဲ့ဖူးသော၊ မှတ်မိသမျှသော ခရာတေးအကွက်ဖြင့် ၄င်းဒန်အိုးပျံအား တိမ်းရှောင်ကာ လေကဲ့သို့လျှင်မြန်သော အဟုန်ဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရှစ်ထပ်တိုက်ကြီး၏ မြေညီထပ်သို့တိုင်အောင်၊ ပြေးဆင်းခဲ့ရလေတော့၏၊ အမှန်မှာ ရှစ်ထပ်သို့အတက်တွင် ကြားခဲ့ရသော အသံမှာ၊ မြေညီထပ်က လာသောအသံ မဟုတ်ပဲ၊ ဆွမ်းဖိတ်ရန်အလို့ငှာ အကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် တံခါးခေါက်ရန် ကြံစည်နေသော တိုက်ခန်းတွင်းမှ လင်းမယားရန်ဖြစ်နေသော အသံသာ ဖြစ်ကြောင်းကို အကျွန်ုပ် နောက်မှ သိရှိခဲ့ရလေသည်၊ အကယ်၍သာ ထိုနေ့ ထိုအချိန်က ထိုတိုက်ခန်းအား တံခါးခေါက်၍ ဆွမ်းဖိတ်မိခဲ့ပါမူ။ .
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 10:54 AM0comments Links to this post
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 10:41 AM0comments Links to this post
တစ်လောကလုံးက ငါ့အား မကောင်းဆိုးဝါးကြီးသဖွယ် ကြည့်နေကြပြီ။ စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ် သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်လို သဘောထားနေကြပြီ။ အန္တရာယ်ကောင်းကြီးသဖွယ် ကျိန်ဆဲနေကြပြီ။ ငါလာရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အတားအဆီးများစွာတို့ဖြင့် ငါ့အား ကန့်ကွက်နေကြလေပြီ။ ငါ့ကို အပြီးပိုင် တိုက်ထုပ်နိုင်ရန် မဟာစီမံကိန်းကြီးများ ချမှတ်နေကြလေပြီ။ ငါ့၏ကျေးဇူးတရားကိုမျှ မထောက်ထားတော့ပဲ ဆန့်ကျင်နေကြလေပြီတကား၊
ငါ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရပါမူ လွန်ခဲ့သော အနှစ် ငါးဆယ်ခန့်ကတည်းက ငါ့၏ လွတ်လပ်မှူကို အပြီးပိုင်စွန့်လွတ်ခဲ့ကာ ယနေ့အထိ ငါ လုံးဝ စိတ်ပျက်အားငယ်မှူမရှိပဲ၊ အစွန်းကုန် ကြိုးစားရုန်းကန်လျှက်၊ ပြည်သူလူထုများ၏ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီးပြီ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မီး ရရှိရေအတွက် ငါ အစွမ်းကုန် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးပြီ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရေ အတွက်လည်း ငါ့၏ အသွေးအသားများအား ထက်ဝက်ခွဲဝေပေးခဲ့ရပြီးပြီ၊ သဘာဝတောတောင် သယံဇာတများကို ငါအစွမ်းကုန် ကြိုးစားရုန်းကန်လျှက် ထွန်းလင်း တောက်ပ စိမ်းလန်းစိုပြေစေခဲ့ပြီးပြီ။
အနှစ် ငါးဆယ်လုံးလုံး အကျဉ်စံဘဝဖြင့် ငါ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်၊ ငါ အတောင်းတဆုံး အလိုချင်ဆုံးဖြစ်သော လွတ်လပ်မှူကို ရှာဖွေရန် အလွန်တရာကျဉ်းမြောင်းလှသော လှောင်အိမ်ထဲမှ ထွက်ခွါသွားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့သည်။
အကျဉ်စံဘဝဖြင့် အနှစ်ငါးဆယ်လုံးလုံး နေခဲ့ရခြင်းသည်လည်း၊ ပြစ်မှူ တစ်စုံတစ်ရာ ကြူးလွန်းခဲ့၍မဟုတ်၊ သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ငါ့အား ချုပ်နှောင်ထားခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်လေသည်။ ငါသည်ကား သဘာဝအလျှောက် အမြဲတမ်း စီးဆင်းနေရမှ ရှင်သန်ရသော အမျိုးဖြစ်လေသည်။
သို့သော် လူတို့၏ အတော်မသတ်နိုင်သော လောဘဇောကြောင့် အနှစ်ငါးဆယ်လုံးလုံး ကျဉ်းမြောင်းကျပ်တည်းလှစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရလေသည်။
အခု ငါ ထွက်ခွါသွားတော့မည် ငါ့အား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ တားဆီးမှူမပြုနှင့်တော့။
မည်သို့ပင် တောင်းမန်သော်လည်း ငါလာရာ လမ်းတစ်လျှောက် ငါ့အား အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံသော အတားအဆီးများဖြင့် မရ ရအောင် ပိတ်ပင်ကြလေသည်၊ သို့သော် ငါ့ကို ချစ်၍တားကြသည်မဟုတ်၊ ငါ့အား မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင် သဖွယ် တားဆီးကြခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ ငါသည်ကား မကောင်းဆိုးဝါးသတ္တဝါတစ်ကောင်မဟုတ်၊ သက်ရှိ သက်မဲ့ မှန်သမျကို အကျိုးပြုနေသော၊ သဘ၀အတိုင်း စီးဆင်းနေသော ရေ သာလျှင် ဖြစ်လေသည်။
ရေ ဟု ဆိုအပ်သော ထိုငါအား၊ လွန်ခဲ့သော နစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပိတ်လှောင်၍ အလွန်တရာကြီးကျယ်လှသော ရေလှောင်ကန်ကြီးဖြင့်၊ စုဆောင်းထားခဲ့ရမှ ယနေ့ တားမနိုင်ဆီးမရဖြစ်ကာ၊ ပွင့်အန် ထွက်ချလာခြင်းသာဖြစ်လေသည်၊ လူသားတို့အား ဒုက္ခပေးရန် ငါ စောင့်ဆိုင်း၍ နေခဲ့သည်မဟုတ်။
မည်သူက မည်မျှပင်တားတား ငါ လုံးဝ နောက်ဆုတ်တော့မည်မဟုတ်၊ တား၍လည်း ရမည်မဟုတ်တော့၊ ငါ၏ သွားလိုရာကား ငါတို့အမျိုးအနွယ်တို့၏ ပျော်စံရာ မဟာသမုဒ္ဒရာပင် ဖြစ်လေသည်။
သို့သော်လည်း လူတို့သည် ပြုခဲ့ဖူးသော ငါ့၏ကျေးဇူးကိုမျှမထောင်ထားပဲ၊ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ နှောင့်ယှက် တားဆီး နေလေတော့သတည်း။
Posted by ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် at 6:19 AM0comments Links to this post